အမေ: တစ်နေ့တော့ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ် . . . မေမေ
တစ်နေ့တော့ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ် . . . မေမေ
မှုန်ပြပြပေမယ့်..“ လင်း ” ပြရှာတယ် မေမေ
“ လင်း ” ပြခဲ့ပြီးပြီလဲဟင် ...
နေတွေမပွင့်ဘူး .. လတွေမသာဘူး
ဂါရ၀တရား နဲ့ ရိုသေမှုဟာ
ကျွန်တော့်မှာ . . . . နောင်တ ဆိုတာကိုအဖော်ပြုလို့
ကျွန်တော်တို့ မိုးရေတွေ အတူသောက်ခဲ့ကြဖူးတယ်
သူတို့ဟာ ဘာကြောင့်များ “ စိမ်း ” သွားကြတာလဲဟင်
မနိုးသော အိပ်မက်များ ကိုယ်စီနဲ့
ကျွန်တော် သားချော့တေးတွေ ပြန်ကြားယောင်မိတယ်
အခါမလပ် အုံ့ဆိုင်း ရစ်သိုင်းနေဆဲပါ မေမေရယ်
ဘ၀ဟာ နေခြင်းလား... သေခြင်းလား
မေမေ့ ၀ဲဂရက်ထဲပဲ ကျွန်တော်လွန့်လူးပျော်မွှေ့ချင်တယ်
မေမေ့ လှေငယ်လေးပဲ ကျွန်တော် လှော်ခတ်ချင်တယ်
ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားတွေ နဲ့ မေမေ့ ရင်ခွင်နွေးနွေးကြား
(အဝေးရောက် “ သား ” များ ကိုယ်စား ခံစားရေးဖွဲ့ပါတယ် )
Posted by moehlaing nya at 9:31 PM
ကျွန်တော်တော့ ဒီကဗျာကိုဖတ်ပြီး အမေနဲ့ အဝေးကြီးမှာတောင် မနေချင်တော့ဘူးဗျာ
အမေ့အိမ်ကိုပဲ ထပြီး ပြန်ပြေးချင်တော့တယ်
လောကရဲ့ အနွေးထွေးဆုံးသော နေရာဟာ
အမေ့ရိပ်မှန်း သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်က ဟိုး..........
အမေ ဆိုတဲ့ အသံကြားတဲ့ အမေ ရင်ခုံသံ တွေ အမြဲကြားနေတာဗျာ.....ကျေးဇူးဗျာ ကဗျာ ဆရာ.......ကဗျာလေး က ထိတယ်ဗျ ကျွန်တော်တို့ လိုအဝေးရောက်နေတဲ့ အမေ ချစ်သားကြီးတွေ အတွက်တော့......ငိုချင်တယ် သိလားးး အမေ မှာလိုက်တဲ့ အမေ မွေးတဲ့ အမေ သားက ခြင်္သေ့ တဲ့ အဲ့ စကားကို အားနာလို့ မျက်ရည် မထွက်ဘူးဗျာာာာာာာာာ
ကဗျာကောင်းလေး ဖတ်ခဲ့ပါတယ်နော် လေးစားခင်မင်စွာဖြင့် (လွမ်း)
''ကျနော့်မျက်ဝန်းတွေထဲ အခါမလပ် အုံ့ဆိုင်း ရစ်သိုင်းနေဆဲပါ မေမေရယ်'' ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို အရမ်းကြိုက်တယ်။
ကျွန်တော် ဒီကဗျာလေးကို ကြိုက်လို့ ကူးသွားပါတယ်..
ဒီကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး အမေ့ကိုတောင် လွမ်းဆွတ်တမ်းတလာပြီ။ ဒါပေမဲ့ အမေက ဟိုးပြန်မဆုံနိုင်တော့တဲ့ အဝေးကြီးကို အပြီးအပိုင် ခွဲထွက်သွားခဲ့ပြီလေ။ ဒီကဗျာကို ဖတ်ပြီး မျက်ရည်လည်မိပါတယ်။ ခုလိုတင်ထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်မင်လေးစားလျက်...
စံပယ်ဖြူ (Jasmine White) said...
အမိမြေမှာ ပြန်လည်ဆုံစည်းကြ မယ်နော်။
After read this poem I really miss my mom.Really touch my heart.But I would like to ask my mom ,'Why u doesn't love me?'
[url=http://buycialispremiumpharmacy.com/#dsnjk]buy cialis online[/url] - buy cialis online , http://buycialispremiumpharmacy.com/#hcmwm generic cialis
[url=http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#zjzbm]buy cheap viagra[/url] - buy cheap viagra , http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#jolfu generic viagra
[url=http://buycialispremiumpharmacy.com/#lhhff]generic cialis[/url] - buy cialis , http://buycialispremiumpharmacy.com/#yehks buy cheap cialis
[url=http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#aaayu]buy viagra online[/url] - buy viagra , http://buyviagrapremiumpharmacy.com/#wihwb generic viagra
[url=http://viagraboutiqueone.com/#tbvzc]buy viagra online[/url] - viagra 120 mg , http://viagraboutiqueone.com/#gmrfb viagra 50 mg
[url=http://buyonlineaccutanenow.com/#znrbq]cheap accutane online[/url] - buy accutane online , http://buyonlineaccutanenow.com/#ltbas accutane online
ကဗျာလည်း ရှယ်ချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ ကဗျာဆရာအမည်ပါ ထည့်ပေးမှာပါခင်ဗျ။
lawoon aein said...
ပြီးတော့ အမေ့ကို အရမ်းသတိရတယ်
အမေ့ ကိုအရမ်းချစ် တယ်
Yaung Zin said...
ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးတစ်ကောင်နဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ